Abavelisi Bokutyala Izityalo | I-China UkuBamba iZityalo kwiFektri kunye nabaXhasi
[Khuphela] uMatshini oBamba iiKhonkrithi oSelfowuni
iindawo zokucoca ukuhambisa izinto
Isityalo sokubambisa ikhonkrithi esiselfowuni uyilo olonyusiweyo lwe-trailer. Isiphatho sokubhabha, umxube wekhonkrithi, iisistim ezinobunzima, iscrow yokuhambisa kunye nesamente yesilili zidityaniswe kakhulu kwiyunithi enqwelisiweyo erhuqwayo, esisakhiwo esidibeneyo.Ukuze kuhlangatyezwane nokusebenza, ukusebenza kunye nokuxinana, isityalo sokubambisa ikhonkrithi esiphathwayo sangaphambi kokuba idityaniswe ngokupheleleyo ukusuka kumzi-mveliso, ocutha ixesha lofakelo kunye nokusebenza kwetyala kwisityalo sokubambisa sekhonkrithi. Into Umenzi MHZS75 ithiyori pr ...
Isityalo sokubamba ikhonkrithi esimileyo
I-HZS uthotho lokuxuba ikhonkrithi yesityalo yinto eyomeleleyo yokuvelisa kunye nezixhobo ezisebenza kakuhle ezinokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi. Ngokusebenza kwemveliso ephezulu, isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo olukhulu kunye naphakathi, ubunjineli be-axial yendlela kunye neefektri eziyimfuneko zokuvelisa iimveliso zekhonkrithi. Isixhobo esifanelekileyo sokuvelisa ikhonkrithi yorhwebo. Inkqubo yayo yokuxuba yamkela i-shaft shaft yokuxuba esinyanzelekileyo, esinokufana okuxubileyo, ixesha elifutshane lokuxuba, ixesha elide ...
Inkqubo yokuDibanisa, Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala, Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo, Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi,